मासुमा भन्दा बढी प्रोटिन हुन्छ बहुगुणी झुसे करेलामा, यस्ता छन् अपत्यारिला फाइदाहरु-: – Krazy NepaL
June 21, 2021 208
झुसे करेला स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपायोगी हुन्छ । यसको तरकारीको सेवनले हाम्रो शरीरलाई अत्यन्तै फाइदा पुग्छ । चट्टेललाई धेरै शक्तिबर्द्धक तरकारी मानिन्छ यसमा मासुको तुलनामा धेरै प्रोटिन हुन्छ अर्थात यो प्रोटिनको भण्डार हो ।
चट्टेलमा पाइन फाइटोकेमिकल्स शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुको साथै यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्डले रगत सफा राखेर छालासम्बन्धी रोग हुन दिँदैन ।रुघाखोकीबाट राहत प्रदान गर्नुको साथै रोक्नसमेत सहयोग गर्छ ।यति मात्र होइन क्यान्सर जस्तो प्राणघात रोगलाई रोक्नसमेत सहयोग गर्छ ।
यसको सेवनले क्यान्सरको रोगीलाई समेत फाइदा पुग्छ ।खासम्बन्धी विभिन्न रोग, मुटु रोगको पनि रोकथाम गर्न सहयोग गर्छ । फाइबरको बढी मात्रा बढी भएकाले शरीरका लागि धेरै फाइदाजनक छ तौल र उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रित गर्नेर् गुण पनि यसमा हुन्छ । यसमा प्रचुर मात्रामा आइरनसमेत पाइन्छ ।
Prevयी ३ समस्या भएकाहरुले भुलेरपनि नखानुहोस् ओखर
Next४ दिन सम्म बिहान खाली पेटमा एक पोटी लसुन चपाउने गर्नुहोस् यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस !
५ मिनेटमै अनुहारमा चमक ल्याउन चाहनुहुन्छ ? उसो भए प्रयोग गर्नुहोस् मात्र यो उपाय
सु’त्ने बेला किन ब्रा खोलेर सु’त्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महि’लाले जान्नै पर्ने !
“श्री’मान बाहिर,नेपा’लमा श्री’मती गर्भ’वती !! क’सको ब’च्चा भने’र सोध्दा’ उन’को जवाफ’ले सबैको होस् उडायो , भीडीयो हेर्नुहोस”
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (44023)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23183)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (17997)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15885)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13993)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13152)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12390)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12189)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12187)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (11787)
जब सारंगाले भनिन्- भुवन केसी नभएको भए सायद धेरै नायिका ‘कुमारी’ नै हुन्थे होला
उमेर बाउ छोरीको जस्तै, तर नाता श्रीमान श्रीमती भएका बलिउडका ७ जोडी
लाखमा एक जना ले देख्छ यस्तो सपना त्यो पनि साउन महिनामा के होला त त्यस्तो फलदायी सपना ?